Somaalia oo Siberia ku sii jeeda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tabaraha Soomaaliya Per Fosshaug oo la taagan ciyaartow soomaali iyo Iswiidhish iskug jira oo kuwada nool magaalada Borlänge. Foto: Martin Eriksson / Sveriges Radio
Somaalia oo Siberia ku sii jeeda
La daabacay onsdag 15 januari 2014 kl 11.08
Soomaaliya ayaa markii ugu horeysey abed ka qayb galeysa tartan heer aduun ah.
Kooxda qaranka Soomaaliya ee xeegada barafka ayaa sida qorsha yahey 25:ka Januari ka socdaali doonta magaalada Borlänge si ay uga qayb galaan tartanka aduunka ee kubada xeegada barafka oo lagu qabanayo magaalada Irkuts ee deegaanka Siberia ee dalka Rushka. Soomaaliya tartankan waxey kaga jirtaa gruppka C oo ay kamid yahiin dalalka kalo ah Jarmalka, Ukrian, japan iyo Manguliya. Ahmed Maxmuud bare oo ah kabtan kooxda qaranka Soomaaliya ayaa shegey in ay jirto fursad ay soomaaliaya dhibco kaga heli karto gruppkan.
Ahmed Bare Kabtan kooxda qaranka soomaaliya ee xeegada barafka ayaa sheegey in gruppka Soomaaliya lagu darey uu yahay grupp waddamada ku jiraa dhamaan ku cusub yahiin tartankan ayna jirto fursad ay soomaaliya dhibco kaga qaadan karto waddamda kamidka ah gruupkan, gaar ahaan waxuu isha ku hayaa waddamada kalo ah Japan iyo Monguliyet, laakiin kooxda qaranka Soomaaliya Waxey ka welwelsan yahiin waddamda Jarmalka iyo Ukrian oo kamid ah gruupka ay Soomaaliya ku jirto, madaama ay waddamadan ku horeeyaan ciyaaraha barafka sida ciyaarta hockiga.
Kooxda qaranka Soomaaliya waxaa laga aas’aasey magalada Borlänge ee dalkan Iswiidhen bartamahii sannadki na dhaafey ee 2013 ka. Dhamaan ciyaartowgina waa dhallinyaro qaxootnimo ku yimid dalkan Iswiidhen oo kuwado nool isla magaaladas. Fikrada ah in la aas’aaso koox Bandi oo Soomaliya u matasha tartanka caalamiga ee ka bilaabanaya dhamaadka bishan magalada Irkuts ee gobolka Siberia ee dalka Ruushka waxaa lahaa nin la yiraahdo Patrik Andersson oo degmada Borlänge u qaabilsan is-dhex-galka. Ujeedana waxey aheyd sidii howlo maawelo loogu sameyn lahaa dhallinyarada Soomaaliada ah ee ku nool degmadas xilliga qaboobaha iyo weliba sidii looga dhex abuuri laha is-dhex-gal Soomaalida iyo bulshada kale ee magaalada ku nool sida laga soo xigtey maamulka mashruuca kooxdan lagu hirgeliyey.
Ciyaartowga rasmiga ah ee qaranka ayaa sida uu sheegey kabtanka hadda ka gooban 18 ciyaar yahan kuwaas oo hadda dhamaantood sifiican u garanaya sida loogu socdo gabaha barafka halkii bilowgii ay wax ka yar afar ruux garanayeen sida loogu socdo gabaha barafka. Laakiin waxaan weli fadhin takniiga iyo qaabka loo ciyaaro ciyaartan. Taas waxey yareyneysaa fursada ah in Soomaaliya goolal ka dhaliso tartankan, sida uu yeri kabtanka qaranka Soomaaliya, inkastoo asbuucyada tartankan ka dhiman kooxdo tareening xoog badan u galayaan sidii ay ugu wanaagsanaan lahaayeen gool dhalinta
"Laakiin gool dhalin iyo goolin dhalin la’aanba waxaan nahey kuwo guulestey" ayuu yeri Ahmed Bare "mar haddii aan mashrucii sidii la rabey kaga dhabeyney, ayna nahey kooxdii ugu horeysey ee qaranka Soomaaliya u matasha tartan ee heer aduun ah".
Hadal heynta Saxaafada caalamka
Ciyaartowga Soomaalida ayaa noqdey kuwo saxaafadda caalamka hadal heyso. Tan iyo markii lagu dhawaaqey in Soomaaliya ka qayb galeyso tartanka aduunka xeega barafka waxaa booqasho ku tagayey magaalada Borlänge gobolka dallarna ee dalka Iswiidhen saxaafad ka socotey caalamka. Waxaan teamka Soomaaliya warbaxino ka diyaariyey saxaafad aduunka ugu waaweyn sida wargeyska caanka ah The World Street Journal, BBC iyo aljaziira. Dadka Borlänge ayaa sidoo kale hadal haya heerka ay dhallinyarada soomalida gaartey ayuu yeri Kabtan Ahmed bare. Waxaase jirta dhallinyaro soomaali ah oo markii hore fursadan loo soo bandhigey balse beer dareeyey oo iminka farta qaniinaya markey hubsadeen in arintana ay dhabowdey, sida uu yeri Ahmed Bare